Musharaxiinta Madaxtinimada Hirshabele oo qudbad u jeediyay baarlamaanka Hirshabelle -
Home News Musharaxiinta Madaxtinimada Hirshabele oo qudbad u jeediyay baarlamaanka Hirshabelle
Musharaxiinta Madaxtinimada Hirshabele oo qudbad u jeediyay baarlamaanka Hirshabelle
Musharaxiinta u tartamaysa xilka Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku xigeenka Hirshabele ayaa maanta qudbad u jeediyay xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle iyagoo qudbadahooda ku soo qaaday barnaamijkooda waxqabad ee afarta sano ee soo socota.
Xilka Madaxweynaha Hirshabelle ayaa waxaa u sharaxan oo qudbadahooda jeediyay Cali Guudlaawe Xuseen iyo C/raxmaan Jimcaale Cismaan halka Madaxweyne ku xigeenka ay u tartamayaan Maxamed Maxamuud Cabdule iyo Yuusuf Axmed Hagar Dabageed.
Musharaxiinta xilka Madaxweynaha oo uu ugu cadcad yahay Madaxweyne ku xigeenkii Hirshabelle afartii sano ee la soo dhaafay Cali Cabdulaahi Xuseen “Cali Guudlaawe” ayaa hadal jeedintiisa waxa uu ku soo koobay shan qodob oo nuxurkooda kala ah;-
1- Dib u heshiisiin dhab ah
Waxa uu sheegay Cali Guudlaawe Xuseen inuu ka shaqeyn doono arrimaha dib u heshiisiinta uuna abuuri doono gole la magac baxay golaha dib u heshiisiinta bulshada Hirshabelle.
2- Horumarinta amniga
Musharax Madaxweynaha Hirshabele Cali Cabdulahi Xuseen ayaa sheegay in arrimaha amniga uu ka shaqeyn doono iyadoo dib u habeyn uu ku sameyn doono ciidamada booliska,garsoorka,la dagaalanka xagjirnimada.
3- Kobcinta dhaqaalaha,
Sidoo kale waxaa uu Musharax Madaxweyne Cali Guudlaawe uu ku sheegay qudbadii uu u jeediyay Baarlamaanka Hirshabelle inuu kobcinta dhaqaalaha qeyb weyn uu ka qaadan doono uuna ka shaqeyn doono sidii dhalinyarada shaqo u heli lahaayeen isla markaana uu dib u dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha waddooyinka,dhismaha garoomada diyaaradaha,dhismaha garoomada diyaaradaha,dhiirigelinta maalgashiga iyo ka faa’ideysiga Beeraha,Kalluunka iyo xoolaha.
4- Adeegyada bulshada
Arrimha ugu muhiimsan ee uu ballanqaaday musharax cali guudlaawe ayaa waxaa ka mid ah inuu sare u qaadi doono arrimaha waxbarashada,caafimaadka iyo weliba horumarinta isboortiga.
Ugu dambeyntii Musharax Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Cabdulaahi Xuseen ayaa sheegay inuu ka shaqeyn doono sidii loo daadejin lahaa maamulka Hirshabelle uuna muwaadin walba oo reer Hirshabelle ah ay gaarto dowladnimada.
XIldhibaanada baarlamaanka Hirshabelle ayaa lagu wadaa in berri oo Arbaca ah ay soo doortaan Madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen cusub,iyadoo guddoonka baarlamaanka Hirshabelle ee dhowaan la doortay ay yihiin kuwo ku cusub hogaanka baarlamaanka Hirshabelle.
qudbadaha musharaxiinta madaxweynaha iyo ku xigeenka hirshabelle
Previous articleMadaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Ethiopia oo taageeray weerarka ku socda Tigray
Next articleThese viral videos do not expose the alleged US election fraud